Vidio: Innovation na-enweta site na idozi nsogbu
Saturday, April 16, 2011 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Na Fraịdee, enyere m ohere ịtụnanya isonye na Summit Innovation Summit nke Compendium. N'okpuru nduzi nke Onye isi ala Frank Dale, nwere echiche sitere n'aka Blake Matheny, yana nkwado nke onye nchoputa Chris Baggott na Sales VP Scott Blezcinski, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara "oge" na-arụ ọrụ yana, kama itinye ụbọchị maka ihe ọhụrụ. Chris malitere ụzọ na akụkọ dị ịtụnanya banyere otu ọ dara n'otu azụmahịa, mana mgbe ọ matara
Runntanetị na-agba ọsọ nke ọma na-enweghị Flash
Fraịdee, June 11, 2010 Tuesday, May 3, 2016 Douglas Karr
Steve Jobs kwuru eziokwu. Onye mbụ gwara m ka m nweta ihe mgbochi Flash bụ Blake Matheny. Blake bụ otu n'ime ndị injinia kachasị mma enwere m obi ụtọ na m ga - arụ ọrụ - mụ na ya rụkọkwara ọrụ na Compendium na ChaCha. Ga-eche na m ga-ege otu nwoke ntị nke gbanwere akụrụngwa na ikpo okwu dịkarịa ala ụlọ ọrụ teknụzụ abụọ dị iche iche. Egeghị m ya ntị. M
Njikọ Ahịa: Na-ekpori ndụ na vidiyo
Mọnde, Febụwarị 2, 2009 Tuesday, October 6, 2020 Douglas Karr
Iwulite ikpo okwu maka ulo oru na blog bu ihe gara nke oma ma oburu na ndi ahia ahu na akwado ikpo okwu a. Anyị maara na ndị ahịa anyị ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ịlaghachi na ntinye ego ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme ha ka ha kee ma kesaa ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa na ọrụ ha. Ihe eji eme Platform chọrọ ka sọftụwia ahụ dị ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ezie nwere atụmatụ iji hụ na itinye n'ọrụ. Site na ịbanye site na nlekota nlekota, ikpo okwu kwesiri ịlele
Were ihe ịma aka 60 nke ịde blọgụ
Monday, October 27, 2008 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Achọrọ m ịkọrọ gị ndị a, nke a bụ ụzọ dị mma iji nweta ndu site na ngosi na weebụsaịtị gị - yana ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ m, Compendium Blogware.
Akwa Ozi! Ọ dịghị onye maara onye You bụ!
Tọzdee, Disemba 18, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Patronpath na-eto eto! N'ihi ụfọdụ ọrụ dị egwu nke ndị ọrụ anyị na-akwado Nkwado, Ahịa na ọkachasị onye isi anyị - Patronpath na-agagharị. Mgbe m chere na sọftụwia dị ka Ọrụ, ọ nweghị nnukwu ihe atụ karịa ịtụ ahịa n'ịntanetị maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri. Amalitere m na Patronpath n'August nke afọ a. Ọrụ ahụ siri ike. Ndi otu anyi gha enweta ihe isi ike ma gha n’iru na ebunye ndi mmadu nsogbu. Nakwa,